Florence & Milly - N'ime obodo
Florence & Milly bụ ụlọ ihe nkiri seramiiki nke na-enye klaasị na klaasị, na-enye ite ọkụ ọkụ maka eserese na ịhazi onwe ya, ihe okike akwa akwa na ihe nbinye ezinụlọ. Ọnọdụ ikuku nke Florence & Milly studio bụ ụmụaka na ndị okenye nwere omume enyi, na -eme ka ọ bụrụ oghere dị mma maka ndị ọgbọ niile ka ha na -emekọrịta ihe na gburugburu nchekwa na ọ funụ.
Na Florence na Milly, a na-enye ndị ahịa ite ihe ha họọrọ ma tinye mmetụ aka na ma ọ bụ na-enweghị ntuziaka dị ka onyinye ma ọ bụ ihe nchekwa. A na-etechasị ihe ndị ikpeazụ ahụ ma tụba ha ọzọ n'ime ite ọkụ. Enwere ike ịnakọta ihe ndị ahụ site na ụlọ ahịa n'ime otu izu ma ọ bụ tinye ya na mmefu ọzọ. Ihe niile dị na tebụl bụ nri na nchekwa efere ozugbo enwuru enwu.
Mpaghara nka nke Florence na Milly bụ ogige nwere nkuzi, nkuzi na ngosipụta dị mma na nka dị ka ụrọ, eserese iko, eserese akwa, eserese nzu na imecha, ihe ịchọ mma ụlọ, ịgba ịnyịnya ígwè, ịchọ mma, nka agịga, ajị. nka, eserese, eserese ndụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Ihe omume niile na -enye ụmụaka na ndị okenye ohere igosipụta akụkụ ihe okike ha, soro ndị enyi na ezinụlọ nọrịa oge, wee mepụta ihe pụrụ iche maka onwe ha ma ọ bụ dị ka onyinye.
Arts & Omenala, Ịzụ ahịa, Nwee ezumike ezinụlọ, Bọchị mmiri ozuzo, Naas
Ụzọ mmiri, Sallins, Obodo Kildare, W91 TK4V, Ireland.
Tọzdee - Satọde: 9.30am - 6pm